← NLD ရပ်တည်ခွင့် တရားရုံးသို့ လျှောက်ထားခွင့်ရ
SSA-S တပ်မဟာ ၁ အခြေချလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့များအား မိုင်းရယ်-သီပေါ ကားလမ်းမြောက်ဘက်မှ တပ်ရုပ်ပြန်ခိုင်း →
လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲမှ တဆင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရန် အလားအလာ မမြင်ကြောင်း ဘန်ကောက်မြို့ ချူလာလောင်ကွန်း တက္ကသိုလ်တွင် ယနေ့ကျင်းပသည့် အရှေ့တောင် အာရှအတွင်းမှ ဒီမိုကရေစီသို့ ကူးပြောင်းခြင်း အမည်ရှိ ဆွေးနွေးပွဲမှတဆင့် တက်ရောက်လာသူများက ပြောဆိုလိုက်ကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲလာ ပရိသတ်များက ၎င်းတို့၏ တိုင်းပြည်တွင် ကြုံတွေ့ ဖြတ်သန်း ခဲ့ဖူးသော အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံကာ ဆွေးနွေး သွားကြခြင်း ဖြစ်သည်။
တက်ရောက် ဆွေးနွေးသူများမှာ မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေး ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (Free Burma Coalition) ကို စတင် တည်ထောင်ပြီး လန်ဒန် တက္ကသိုလ်တွင် နိုင်ငံရေး သိပံ္ပနှင့် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ သုတေသီ ပညာရှင် အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူ ဒေါက်တာ ဇာနည်၊ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ မှတ်တမ်းဌာနမှ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Mr. Youk Chang၊ ချူလာလောင်ကွန်း တက္ကသိုလ်မှ Dr. Thitinan Pongsudhirak နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Mohammad Hatta တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ယင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် အရှေ့တောင်အာရှအတွင်းရှိ နိုင်ငံတချို့သည် စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်၌ ကြာရှည်စွာ အုပ်ချုပ်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား။ အင်ဒိုနီးရှား စသည့်နိုင်ငံ တို့သည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် နေထိုင်ခဲ့ဖူးသော အတွေ့အကြုံများ ရှိခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ထိုနိုင်ငံများ၏ ဒီမိုကရေစီ စနစ်သို့ ကူးပြောင်းကြခြင်း၊ ကူးပြောင်းရန် ကြိုးစားခဲ့ကြခြင်းများကို စံထားကာ မကြာမီ ပြုလုပ်တော့မည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်တွင် ဝေဖန်သုံးသပ်ကြသည်။
ဒေါက်တာဇာနည်က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ဆူဟာတို အာဏာရှင်ခေတ် နောက်ပိုင်း ၁၉၉၇ ခုနှစ်၌ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးစဉ်က စစ်တပ်သည် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းရယူခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် အင်ဒိုနီးရှား စစ်တပ်အရာရှိများသည် လွှတ်တော်အတွင်း၌ မတရားအနိုင်ကျင့်မှု၊ စီးပွားရေး လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် အခွင့်အရေး မရရှိတော့ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ယင်းကဲ့သို့ မရရှိတော့ခြင်းမှာ ပြည်သူလူထုနှင့် တိုင်းပြည်ကို ကောင်းစားစေလိုသော စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ လက်တွဲကာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်ခြင်း၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပျက်ကပ်က အင်ဒိုနီးရှား စီးပွားရေးကို ဗုန်းဗုန်းလဲ စေခဲ့ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အတိုက်အခံအင်အားစုများ၊ ပြည်သူလူထုနှင့် စစ်တပ်အတွင်းမှ တိုင်းပြည်ကောင်းစားစေချင်သော စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ လက်တွဲပြီး အာဏာရှင်စနစ်ကို တိုက်ဖျက်မှသာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမည်၊ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားလာမည်ဟု ဒေါက်တာဇာနည်က ဆိုသည်။
ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆက်လက်အသက်သွင်းရန် ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်မည့် နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲမှ မည်သည့် ကောင်းကျိုးရလဒ်ကိုမျှ ရလာမည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
“ဖက်ဆစ် ဂျပန်လက်ထက်တုန်းက ကျနော်တို့ကို အတုအယောင် လွတ်လပ်ရေး ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကို စကားလုံးလှလှနဲ့ ရွှေရည်စိမ် လွတ်လပ်ရေးလို့ တင်စားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ နအဖက လုပ်ပေးမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကတော့ ရွှေရည်မပြောနဲ့ ကြေးရည်တောင် မစိမ်ထားဘူး” ဟု ဒေါက်တာ ဇာနည်က ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အင်ဒိုနီးရှား သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Mohammad Hatta က “အင်ဒိုနီးရှားမှာ ဆူဟာတို ခေတ်လွန်က စပြီး ပြည်သူနဲ့ တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးကို လိုလားတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ လက်တွဲပြီး အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ လွတ်လပ်ရေး ပေးသင့်တဲ့ အရှေ့တီမောလိုနိုင်ငံမျိုးကို လွတ်လပ်ရေးပေးလိုက်တယ်၊ အာချေးကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးတယ်၊ သူတို့ကလည်း ခွဲထွက်မသွားဘူး” ဟု ဒီမိုကရေစီ စနစ်အခြေခိုင်အောင် လုပ်ခဲ့ပုံကို ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ခမာနီ အရေးခင်းမှ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူ Mr. Youk Chang က သူ၏ နိုင်ငံ၌ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂမှ ကျောထောက်နောက်ခံပြုပြီး ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ပအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်သော တော်ဝင်ပါတီ (Royalist Party) က အနိုင်ရခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံလောက် အသုံးပြုပြီးတဲ့ အခုအချိန်မှာတော့ ကုလသမဂ္ဂက ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို ဆန့်ကျင်ပေမယ့်လည်း အရှုံးသမားတွေကို အစိုးရဖွဲ့ဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ” ဟု Mr. Youk Chang က ပြောဆိုသည်။
အရှေ့တောင်အာရှအတွင်း ဒီမိုကရေစီ၏ ရှေ့ဆောင်နိုင်ငံဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သော ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး နိုင်ငံကို မောင်းနှင်နေသည့် ပညာတတ်များ၊ တော်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည့် လက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့သည် ယခုအချိန်တွင် ရှပ်နီများ ကဲ့သို့ အတိုက်အခံပါတီများနှင့် ပတ်သက်၍ တစုံတရာကို ခွင့်ပြုရန် ကြောက်ရွံ့နေကြပြီး ထိုမှတဆင့် အရာအားလုံး ဆုံးရှုံးမည်ကိုပါကြောက်ရွံ့နေကြသည်ဟု ချူလာလောင်ကွန်း တက္ကသိုလ်မှ Dr. Thitinan Pongsudhirak က ပြောဆိုသည်။
၎င်းက ထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးသည် တခြားတဦးကို တရားစွဲဆိုခွင့်ရှိပြီး တော်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များအား မည်သို့မျှ ပြောဆိုခွင့် မရှိသည်မှာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်မရှိခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ဆုတ်ယုတ်လာစေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ထိုင်း တပ်မတော်၏ စစ်ဦးစီးချုပ် အသစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Prayuth ၏ ထိုင်း တပ်မတော်သည် နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်လိုစိတ် မရှိသော်လည်း လိုအပ်လာပါက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရမည် ဆိုသည့် အမိန့်ကိုလည်း ယနေ့ဆွေးနွေးပွဲတွင် Dr. Thitinan Pongsudhirak က ထောက်ပြ ပြောဆိုသွားသည်။